Ukuzala kweekati eziJongeka njengeNgwe okanye iZilwanyana zasendle - Ikati Ukufuya
Ukuzala kweekati eziJongeka njengeNgwe okanye iZilwanyana zasendle
Wonke umntu othanda iikati uyazi ukuba amakhaya anobuhlobo aphuma kwiikati ezinkulu zasendle ezinobundlobongela. Unokumangaliswa kukufunda malunga neekati zendlu zasekhaya ezazenzelwe ngabom ukuba zifane neenguqulelo ezincinci zeekati ezinkulu. Ukuba ukhe wafuna ikati yendlu ebonakala ngathi yingwe, ingwenkala, ingwe okanye enye inyamakazi enkulu yasendle, nazi iintlobo ezili-14 zokuba uthandane nazo.
ukubeka phi iviniga ngaphambili kwewasher yomthwalo
Ukuba ungathanda ukuba nekati yendlu ebonakala njengengonyama,wase-Abyssiniailingana netyala. Olunye lweyona mfuyo indala yekati eyaziwayo emntwini, ezi kati zihle zincinci ukuya phakathi ngokomlinganiselo, zinobunzima obuziisentimitha ezintandathu ukuya kwezili-10. Idyasi yabo iza ngemibala emine eyahlukeneyo nangona i-shades ebomvu nebomvu zizinto ezaziwa kakhulu. Ungazifumana ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nefawn kwaye yonke imibala yabo yedyasi inayoUkukhawuleza kwithebhu. Phakathi kweebhatyi zabo ezingaqhelekanga, amehlo abo aluhlaza okothusayo okanye igolide kunye ne-lithe, ukwakhiwa kwemisipha, ezi kati zivusa umfanekiso wengonyama izula-zula kwintlango, nangona incinci kakhulu.
IPixiebob Cat Ikati yeProfayili kunye neNyaniso
Ukutya okufanelekileyo kweKati emanzi kweKati esisityebi
Abanye abanini bekati bathanda ukubukeka kweekati ezincinci zaseMntla Melika kwaye bonwabele umbono wokuba nekati yendlu ebonakala njenge bobcat. Inkqubo ye-I-American Bobtailluhlobo olunomdla kuba ngokwenyani lukhangeleka njenge bobcat yasendle. Banomsila omfutshane, obojiweyo, umzimba omkhulu onamandla kunye nemilenze yangasemva emide yekati yasendle. Nangona kunjalo, eneneni zazenziwe ngokufuya iikati zasendle ezinokuvela ngokwendalo kwaye hayi ukusuka kwi-bobcats uqobo. Olu luhlobo lunokuza nangayiphi na imibala, kodwa yileIinguqulelo zethebhuezenza ukuba zibonakale ngathi zincinci zekhaya.
Ikati yasekhaya ebonakala ngathi yingwe okanye ikati yasendle yaseAfrika,iBengalYikati eyindumasi eyaziwayo eneeekati zasendle njengenxalenye yenkqubo yazo yokuzala. I-Bengal yenziwa ngokuzala iikati zase-Asiya iikati kunye neentlobo zasekhaya ezinje nge-Abyssinian,UBritish Shorthair, Mau wase-Egypt, iBombay okanye i-Ocicat. I-Bengals ziikati ezinkulu, ezinobunzima ukusuka kwiiponti ezisibhozo ukuya kwi-15. Ezi kati zisebenza kakhulu njengamahlosi amancinci ekhayeni lakho ngokunjalo kwaye ayingomnini wekati ongakhuthazwanga okanye oxakekileyo. Banobukrelekrele kakhulu kwaye banomdla kakhulu kwaye bafuna unxibelelwano oluninzi kunye nokuzilolonga ukuze bahlale bonwabile.
Ukuba ikati yendlu ebonakala ngathi yipherher isitayile sakho,iBombaylukhetho oluhle kakhulu. Ezi kati zi mnyama ezinzulwini zobusuku zazalelwa ukujongwa ngokukodwa njengama-panther amancinci. Ngaphandle kwembonakalo yabo yasendle, banobubele kwaye bathanda iikati abanokukhetha ukungxamela emathangeni kunokuzingela emahlathini. IBombay yaphuhliswa e-US ngokuzala abamnyamaI-Shorthair yaseMelikaiikati ezityalwaIikati zaseBurma. Ziikati eziphakathi ngokomzimba ezinemisipha, imizimba egudileyo kunye nokubetha ngegolide kumehlo obhedu. Ayisiyo kuphela uboya babo umbala onzulu omnyama, kodwa iimpumlo zabo kunye neepaw zeepaw zikwanjalo.
Olunye uhlobo lwe-hybrid,ChausieNgokuqinisekileyo ikati yasekhaya ebonakala njengengonyama, okanye mhlawumbi ingonyama yasentabeni okanye ipuma. Le kati yenziwa ngokuzala i-Jungle Cat (felis chaus), eyinzalelwane yo Mzantsi Asia kunye ne Nile Valley kunye nezinye iikati ezifuywayo ezifana ne Abyssinia kunyeI-Shorthair yaseMpuma. Ezi ziikati ezinkulu ezinokulinganisa ubunzima beepawundi ezingama-25 kwaye zinemizimba enezihlunu ezomeleleyo, imilenze emide kunye nokujongwa 'kwendalo' ngokubanzi. Bawathanda amanzi olu luphawu abalithathileyo kookhokho babo basendle. I-Chausies yaziwa ngokuba nothando, iikati ezidlalayo ezifuna ukhathalelo oluninzi kunye nengqwalaselo kwaye ayilungelanga umnini wekati ophakathi ofuna ukhuseleko olusezantsi.
Ikati enegama elimnandi, Cheetoh sesona silwanyana sikhethiweyo kumntu ofuna ikati yendlu ekhangeleka ngathi yingwenkala. ICheetoh yaphuhliswa ngokuzala ii-Bengals kunye nee-Ocicats kwaye yabelana ngokufana ne-Asia Leopard Cat engukhokho wazo zonke iintlobo ezintathu. Ziikati ezinkulu, ezinobunzima obuphakathi kwe-15 kunye ne-23 yeepawundi kwaye zinokwakha imidlalo njengeminye imixube Nangona baziwa ngokuba ziikati ezimnandi, bafuna ukusebenzisana okuninzi, ukuzilolonga kunye nokuzityebisa ukuze bonwabe kwaye banokuba nobukrelekrele ngokuqatha. Le yikati enkulu ukuba unayo ukuba ufuna ukuyifundisa ukuhamba kwi-leash kwaye uphume nawe, kwaye kuyakufuneka uchithe ixesha elininzi udlala kwaye usebenzise i-Cheetoh ukuze uhlale wonwabile. Okanye nokuba bhetele, babini ukuze badlale kwaye bagcine inkampani enye xa kufuneka uye emsebenzini.
Inkqubo ye-Mau waseYiputayikati emangalisa ngokwenene ukuyibona. Zikwenye yezona ntlobo zindala zekati kwaye kucingelwa ukuba zivela kwi-African Wild Cat yase-Egypt. Zizo kuphela iindidi zekati ezifuyiweyo ezibonwayo, ezibanika imbonakalo yekati yasendle efana neCheetah okanye iNgwe. Ingubo yabo iza ngesilivere, ubhedu okanye umsi kunye nepateni ebonakalayo. Zincinci iikati eziphakathi, ezinobunzima phakathi kweephawundi ezisixhenxe ukuya kwi-11 kwaye zinomzimba obukekayo, i-lithe kunye neembaleki kwaye imilenze yazo yangasemva inde kunemilenze yangaphambili.
Inkqubo ye-Ikati yasezintabeniyaziwa ngokuba yi-Highlander Shorthair okanye i-Highland Lynx. Yaphuhliswa kwiminyaka ye-2000 kusetyenziswa iDesert Lynx kunye nezinye iikati zasekhaya. Ezi ziikati ezinkulu ezijongeka kakhulu njenge-Lynx forebears, ngakumbi ngeendlebe zazo ezijijekileyo nezomileyo, umsila ogqityiweyo kunye nombala weetabby kunye neepateni. Ngokwenene beza kwimibala emininzi kunye neepateni ngokunjalo. Yasezintabeni waziwa ngokuba ngumntu osisiyatha. Banobuqili kwaye bayasebenza ke baya kwenza okungcono ngomnini ofuna ukuchitha ixesha ebaqeqesha ukuba benze izinto ezonwabisayo kwaye abagcine besebenza kwaye bezibandakanya.
Ngaba kukho umnqweno kubantu abadala
Ukuba ukhetha ikati yendlu ejongeka njenge-Ocelot okanye enye ikati encinci yehlathi,IOcicatkufanelekile ukujongwa. Eyaziwa ngengubo yabo entle enamachaphaza, ngokuqinisekileyo bakhupha inkangeleko yekati yasendle encinci elele endlwini yakho. Ngokwenene zenziwe ngokuzala i-Abyssinians, iAmerican Shorthair kunye neekati zaseSiamese. Ziikati ezinkulu ezinomzimba onezihlunu ezakhelwe ukhuphiswano lwezemidlalo kwaye zezona zilungileyo kumakhaya anexesha kunye namandla kubuntu babo. Baye bachazwa njengezinja kwaye bayabathanda abantu babo. Ifayile yeOcicat inokufumaneka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, itshokholethi, isilivere chocolate, isinamoni, isinamoni-isilivere, isiliva ebony, i-fawn, i-fawn-silver, i-lavender, i-lavender yesilivere kunye ne-tawny. Baza nayo nayiphi na le mibala isisiseko kunye nayo nayiphi na iipateni zeetabby nangona ibonwa yeyona ifunwa kakhulu emva kokujonga.
Enye ikati yasekhaya ekhangeleka njenge bobcat,iPixiebobyikati enobuhlobo nenencasa enobuntu obufana nenja. Nangona kunamahemuhemu okuba abe ne-Coastal Red Bobcat yokwenyani kwizinyanya zayo, iPixiebob ayinayo kwaphela. I-Pixiebob yafuywa kwii-tabbies ezinomsila odibeneyo wendalo. Nangona bengenabo uBobcat wangempela kwimvelaphi yabo, bajongeka kakhulu njengalowo uhlala ekhaya. Zinkulu, zinobunzima obusuka kwi-14 ukuya kwi-18 yeepawundi kwaye zi-stocky, ziikati ezinobungqingili ezinomzimba ofanayo kunye nemeko yentloko kwiBobcat. Idyasi yabo inokuba mfutshane okanye inde kwaye ingena ibonakale, i-rosette, i-classic okanye i-mackerel iipateni zeetabby kwisiseko esimdaka esiphuma kumbala omdaka ngombala ukuya kumbala obomvu-mdaka.
I-Savannahyikati yendlu ebonakala ngathi yi-Cheetah, nangona yayenziwe nge-Serval yase-Afrika yasendle. Ezi ziikati ezinkulu ezibambe iRekhodi yeGuinness yekati ende yasekhaya. Banobunzima obumalunga neepawundi ezili-12 ukuya kwezingama-25 kwaye banemizimba emide, ebhityileyo neyomeleleyo yemisipha, kakhulu xa kuthelekiswa ukubonakala kobukhulu beNgwenkala. Idyasi yazo inepateni enamachokoza exutywe nemivimbo kwaye iza ngombala omnyama, omdaka, isilivere kunye nomsi. Njengamanye ama-hybridi, bachazwa njengezinja, banengqiqo kwaye basebenza kakhulu. I-Savannah Unokwenza okungcono ekhayeni nomntu ofuna ukubeka ixesha elininzi kunye namandla kuqeqesho kunye nokudlala nekati yabo.
Enye ikati yasekhaya ebonakala ngathi yikati yasendle iSerengeti . Olu hlobo lwaphuhliswa ngokuzala i-Oriental Shorthair kunye neekati ze-Bengal ukwenza ikati ejongeka ngokufana ne-African Serval. Ziikati eziphakathi ukuya kwezinkulu ezinobunzima obujikeleze iiponti ezisibhozo ukuya kwi-15. I-Serengeti ineembaleki eziqhelekileyo, 'zasendle' zokwakha ezinye iikati ezifanayo ezixubileyo. Bayaziwa ngokuba ziimbaleki ezimangalisayo eziza kutsiba kuyo nayiphi na into abanokuyenza ekhayeni lakho nakwimithi yekati, iishelfu kunye neepherches ziya kuba 'ziyimfuneko' ngolu hlobo. Idyasi yazo ingena ngombala omdaka ngegolide okanye ngesilivere okanye ngombala wetabby. Banokuza ngomsi oqinileyo omnyama okanye omnyama.
Ukuba uyayithanda imbonakalo kunye nobuntu base-Abyssinia kodwa ukhetha ikati eneenwele ezinde,amaSomalialukhetho oluhle kakhulu. Olu luhlobo lwenziwa njengohlobo lweenwele ezinde kwi-Abyssinia eneenwele ezimfutshane. Zombini iintlobo zinokwabelana ngobuntu obufanayo, ubukrelekrele obuphezulu, amandla kunye nokuqhuba. Ngenxa yoboya obude, amaSomalia ngamanye amaxesha akhangeleka njengengonyama ecekethekileyo okanye kwi-engile ethile, impungutye enoboya ngenxa yomsila wazo onamahlahla.
Umdlalo wokudlala yikati yendlu ejongeka njengehlosi, kungoko igama labo. Zizilwanyana ezinobungakanani obuphakathi ezaziwayo ukuba ziyathandana kwaye zihlala kunye nabantu. Uhlobo luye lwaphuhliswa ngokuzala iikati ezimfutshane ezinemigca yeebhokhwe kunye ne-Bengals ukuvelisa ngabom ikati enemigca kunye ne-rosette marking efumaneka emzimbeni nasentloko yehlosi. Umbala wabo wesiseko ngumthunzi omdaka o-orenji otshintsha kumbala omhlophe-mhlophe esiswini sekati. Ubume bomzimba wayo bufana nengwe, ngokwakha izihlunu, imilenze yangemva enamandla, iinyawo zayo ezinkulu kunye nomzimba omde, omninzi. Banobunzima obujikeleze iiponti ezisixhenxe ukuya kwi-15. Nangona zithathwa njengezikrelekrele kakhulu, ziyaziwa ngokuba ikati ekulula ngakumbi kwaye azinazo iimfuno zokuzilolonga ezigabadeleyo.
Ukukhangela iikati zasekhaya ezinembonakalo yasendle
Kukho iindlela ezininzi ezikhoyo namhlanje zokufumana ikati yendlu enokubonakala ngathi ingwe yakho encinci, ingonyama okanye ingwenkala, phakathi kwezinye iintlobo zezilwanyana zasendle. Ezinye zezi ntlobo zintsha kwaye kunzima ukuzifumana kwaye kufuneka uziphande ngononophelo ngaphambi kokufumana enye. Ngokukodwa kwiintlobo ezinazo iikati zasendle kwilifa labo, zilungiselele iqabane elinekati elinobukrelekrele obuninzi, amandla kunye nokuhamba gwenxa xa ungachithi ixesha elaneleyo suku ngalunye uzilolonga kwaye uzonwabisa.
I-Custom And Handcrafted Jew Jewelry Iinwele Loss Online Games Diy Ifanitshala Iindleko Ze-Costume Iifowuni
Izizathu ezili-10 zokuthanda iibhulukhwe zeYoga
Imifanekiso yeentlobo zeHoneysuckle
Yimalini i-Kate Spade purse?
Iikuki zeHazelnut zeHazelnut yetshokholethi
ezona nyaniso ziyinyani
zingaphi izinto zokutyhala ekufuneka ndikwazi ukuzenza
indlela yokwenza isilayidi sombane
indlela yokuhlisa ikati emthini